"> कन्चनपुरबाट आजै १३ हजार नेपाल भित्रिए, के सबै नेपाली हुन् ? – www.agnijwala.com
कन्चनपुरबाट आजै १३ हजार नेपाल भित्रिए, के सबै नेपाली हुन् ?
कैलाली । शनिबारको समाचारअनुसार भारतका विभिन्न २० राज्यमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । यस समाचारबाट भारतमा ठूलो हलचल मच्चिएको समाचार भारतीय टिभीहरुले दिइरहेका छन् ।
यसैक्रममा भारतमा कोरोनाको संक्रमणको त्रास बढ्न थालेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरू धमाधम घर फर्किन थालेका छन् । उनीहरु धमाधम नेपाल फर्किके क्रममा नेपालका विभिन्न नाकाहरुमा ठूलो भीडभाड लाग्न थालेको छ । नाकाहरुमा बडो डरलाग्दोगरी ह्वात्तै भीड बढेको समाचारमा जनाइएको छ ।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट शनिबार प्राप्त समाचारअनुसार ठूलो संख्याका मानिस नेपाल छिरेका छन् । यहाँबाट आजै मात्र ६ घण्टामा १३ हजार मानिस नेपाल छिरेका बताइएको छ । उक्त अवस्थाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि आज उक्त स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेको बताइएको छ ।
भारत सरकारले त्यहाँ आइतबारलाई नागरिक कफ्र्यू भनी घोषणा गरेको छ । कोरानाको संक्रमण फैलिन थालेसँगै रोजगारी बन्द हुने अवस्था देखिएपछि संक्रमणबाट जोगिन नेपालीहरु धमाधम घर फर्किन थालेका हुन् ।
शनिबार बिहान भारतबाट फर्किनेको भीडले गड्डाचौकी नाकामा सवारी साधन ठप्प भएका थिए । बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म करिब १३ हजार मानिस नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।
यतिबेला सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको महत्त्वपूर्ण चाड बिसुपर्व आउन लागेको छ । अबको तीनसाता पछि आउने सो चाडका लागि नेपाल आएको बताए पनि यो समयमा यति ठूलो संख्यामा भने यहाँबाट मानिस भित्रिने गर्दैनथे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले शनिबारदेखि गड्डाचौकी बाहेकका अन्य साना नाकाहरू बन्द गरेको जनाएको छ । गड्डाचौकीबाट पनि भारत नजान आग्रह गरिएको भए पनि उता जाने क्रम पनि जारी नै छ ।
यहाँको स्थानीय प्रशासनले भारतबाट आएका सबैको नाम र ठेगाना संकलन गर्ने काम भइरहेको बताएको छ । तर पनि त्यो काम अब सम्भव नहुने धेरैको भनाई छ । ‘भारतमा त्रास छ । उद्योग कलकारखाना सबै बन्द भए’ त्यसैले हामी घर फर्र्किएका हौँ, नाम बताउन नचाहने एकजना नेपालीले भने ।
तर डरलाग्दो कुरा त के छ भने यसरी नेपाल प्रवेश गर्नेमा नेपाली मात्र छन् कि भारतीय पनि छन् भन्ने हो । भारतमा शनिबार सम्ममा विभिन्न २० राज्यमा सयौँको संख्यामा कोरोनाका संक्रमित भेटिएका छन् । नेपाल प्रवेश गर्नेमा केही भारतीय नागरिकसमेत रहेकाले उनीहरुबाट नेपालमा संक्रमण बढ्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । तर यता सरकारले आन्तरिक आवतजावत पनि बन्द गर्ने र २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन पनि नदिने । तर उताबाट भने यसरी हजारौँको संख्यामा मानिसहरु एकै ठाउँबाट नेपाल आइरहेकोले यसबाट समस्या उत्पन्न हुनसुक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।